Vaovao - Ny andraikitry ny asidra amine
1.Ny fandevonan-kanina sy ny fandraisana ny proteinina ao amin'ny vatana dia tanterahina amin'ny alàlan'ny asidra amine: satria ny singa mahavelona voalohany ao amin'ny vatana, ny proteinina dia manana anjara toerana miharihary amin'ny sakafo ara-tsakafo, nefa tsy azo ampiasaina mivantana amin'ny vatana. Izy io dia ampiasaina amin'ny famadihana molekiola asidra amine kely.
2. milalaova ny anjara asan'ny fifandanjan'ny azota: raha mety ny kalitao sy ny habetsaky ny proteinina amin'ny sakafo isan'andro, ny habetsaky ny azota entina dia mitovy amin'ny habetsaky ny azota entina avy amin'ny diky, urine sy ny hoditra, izay antsoina hoe fandanjalanjana tanteraka ny azota. Raha ny marina dia ny fifandanjana eo amin'ny synthesis mitohy sy ny fanapahana ny proteinina sy ny asidra amine. Ny fihinanana proteinina isan'andro an'ny olon-tsotra dia tokony hotehirizina ao anatin'ny faritra iray. Rehefa mitombo na mihena tampoka ny fihinanana sakafo dia mbola afaka mifehy ny fatran'ny proteinina ny vatana mba hitazomana ny fifandanjan'ny azota. Ny fihinanana proteinina be loatra, mihoatra ny fahafahan'ny vatana mifehy, ho simba ny rafitra mifandanja. Raha tsy mihinana proteinina mihitsy ianao, dia mbola ho simba ny proteinina ao amin'ny vatanao, ary hitohy ny fifandanjana azota manimba. Raha tsy mandray fepetra fanitsiana ara-potoana ianao dia ho faty amin'ny farany izy.
3. Fanovana ho siramamy na tavy: asidra a-keto novokarin'ny catabolism an'ny asidra amine dia namboarina niaraka tamin'ny lalan'ny siramamy na tavy misy toetra samy hafa. ny asidra a-keto dia azo averina averina ho asidra amine vaovao, na avadika siramamy na tavy, na miditra amin'ny tsimbadika tri-carboxy hanefena sy hanjary ho lasa CO2 sy H2O, ary hamoaka angovo.
4. Mandraisa anjara amin'ny famoronana enzima, hormonina ary vitamina sasany: ny toetra simika an'ny anzima dia proteinina (asidra asidra aminezika asidra), toy ny amylase, pepsin, cholinesterase, carbonic anhydrase, transaminase, sns. ny hormonina dia proteinina na ny vokariny, toy ny hormone mitombo, ny hormonina manentana ny tiroid, adrenaline, insuline, enterotropine sns. Ny vitamina sasany dia navadika ho asidra amine na natambatra amin'ny proteinina. Ny enzim, ny hormonina ary ny vitamina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fifehezana ny fiasa ara-batana sy ny fikajiana ny metabolisma.